Dagaalo dambe iyo mamnuucista hubka nukliyeerka ma jiro - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Sawir ahaan cottonbro via pexels
"Bani'aadamku waa inay joojiyaan dagaalka, haddii kale dagaalku wuxuu soo afjari doonaa aadanaha." Pres. John F. Kennedy, Oktoobar 1963
"Khilaafka dhabta ah wuxuu u dhexeeyaa quwadaha u adeegsada dadka iyo dalalka iyaga oo wax is-daba-marinaya, cabudhinaya oo iska horkeenaya midba midka kale si ay faa'iido iyo faa'iido u helaan. Rafael de la Rubia, Abriil 2022
Horudhaca Tifaftiraha: Baahida Waxtarka ah ee Joojinta Dagaalka
Haddii wax waxtar leh ay ka yimaadaan masiibooyinka Ukraine, waxay noqon kartaa kor u kaca mugga baaqa joojinta dagaalka. Adeegga dibinta dheer ee la siiyay hadafka kama dambaysta ah ee tillaabooyin badan oo aan caadi ahayn oo xagga nabadda ah ayaa loo qaaday si loo dhammeeyo iskahorimaadyada gaarka ah, sida halhays lagu buunbuuninayo taageerada caanka ah ee "dagaal lagu soo afjarayo dhammaan dagaalka;" sida aragti ah oo ku wargeliyay diblomaasiyadda iyo dhaqdhaqaaqa nabadda ilaa qarnigii siddeed iyo tobnaad, sida mawduuca Agenda Hague ee Nabadda iyo Cadaaladda qarniga 21-aad, iyo talo ahaan ee dhawaan la daabacay warbixin ku saabsan Ukraine by the Teachers College Columbia University kooxda u doodista Afgaanistaan, fikradda iyo yoolka baabi'inta ayaa hadda ka soo wareegaysa durugsanaanta khiyaaliga ku habboon una gudbaya hadalka lagama maarmaanka ah.
Baahidaas wax ku oolka ah, ee si hufan loogu xusay ciwaankii Madaxweyne John F Kennedy ee 1963 ee Qaramada Midoobay, ayaa si adag loogu celiyay iyada oo ku jirta macnaha guud ee mas'uuliyadda masiibooyinka Ukraine maqaalkan dhow ee Rafael de la Rubia. Waxaan aaminsanahay in labada bayaan la akhriyo oo si dhab ah looga hadlo marka la eego xaqiiqooyinka jira ee iskahorimaadyada hubaysan ee badan iyo khatarta nukliyeerka ee soo afjari karta bulshada aadanaha. Dhammaan inta aaminsan in nabaddu suurtagal tahay, haddii rabitaan iyo ficil bani'aadmigu ka dhigo mid macquul ah, waa inay ka hortagaan caqabadan. Maxaan u baahanahay inaan barano oo aan gaarno si aan suurta gal uga dhigno? (BAR – Abriil 11, 2022)
Yaa ka masuula khilaafka?
Lama oga tirada dadka reer Ukraine ee ku dhimatay, sidoo kale lama oga tirada dhalinyarada Ruushka ah ee lagu qasbay inay dagaalamaan. Marka la eego sawirada, waxay noqon doontaa kumankun, haddii aan ku darno naafada jir ahaan, kuwa niyad ahaan naafada ah, kuwa ay saameeyeen jabka dhabta ah ee jira iyo cabsida uu dagaalkan Ukraine soo saaro. Kumanaan dhismooyin ah ayaa la burburiyay, guryo, dugsiyo iyo meelo lagu wada noolaado ayaa la baabi'iyay. Nolosha iyo mashaariicda aan la tirin karin ayaa gooyay, iyo sidoo kale xiriirkii uu jabiyay dagaalku. Tirada barokacayaasha iyo qaxoontiga ayaa durba gaadhay malaayiin. Laakin intaas kuma eka. Boqolaal milyan ayaa waxaa durba saameysay kor u kaca qiimaha maciishada ee adduunka, balaayiin kale ayaa laga yaabaa inay saameyso.
In badan oo ka mid ah bani-aadmigan waxay ahaayeen kuwo isku waafaqay waaberiga nolosha. Isma garanayn, laakiin waa ay halganayeen ilaa ay naftu ka gaabisay. Ama, sida dhalinyaro badan oo Yukreeniyaan ah, way qariyaan si aan loogu yeerin dagaal "... Aad baan u yarahay inaan dhinto oo aan dilo..." waxay yiraahdaan. Waxaa kaloo jira caruur, waayeel iyo haween badan oo ay noloshoodu ku jabtay dagaal, la yiri, cidna ma rabto.
Yaynu ku tilmaamaynaa inuu masuul ka yahay dembiyadan oo kale? Midka soo jiiday ama gantaalka riday? Kii amray in la weeraro? Hubka kan sameeyay ma kan iibiya mise kan ku deeqay? Midka naqshadeeyay software-ka si uu ula socdo gantaalka? Midka hadalkiisa dhiiga ku huriyay mise kan goglan beeray? Midka maqaalkiisa iyo xogtiisa beenta ah ku abuuray fagaaraha nacaybka? Kii soo diyaariyay weerarro been abuur ah iyo dembiyo dagaal oo been abuur ah si uu dhinaca kale u eedeeyo? Bal ii sheeg, fadlan, yaad farta ku fiiqaysaa: kan isaga oo aan xil ka qaadin, ka saara dhimashadeeda? Midka alifay sheekoyin uu qof kale ka xado? Waa la wada ogsoon yahay in waxa ugu horreeya ee ku dhinta dagaallada ay tahay runta… Haddaba, ma wakiillada siyaasadda ayaa mas'uul ka ah? Ma warbaahinta waaweyn ee dacaayadaha ayaa ka masuul ah? Ma kuwa xidha oo faafreeb ku sameeya warbaahinta qaarkeed? Mise kuwa sameeya ciyaaraha fiidiyowga ee aad isku daydo inaad disho qofka kaa soo horjeeda? Ma Putin baa kaligii-taliye Ruush ah oo raba inuu balaadhiyo oo dib u bilaabo hammigiisa Imperialism? Mise waa NATO, oo si aad u dhow u xidhanaysa, dabadeed ballan qaadaysa in aanay balaadhin, iyada oo saddex jibaartay tirada dalalka? Kuwaas oo dhan yaa mas’uul ka ah? Midna? Mise wax yar?
Kuwa u tilmaamaya kuwa eedda leh iyaga oo aan tixraacin macnaha guud ee waxaas oo dhami ay suurtagal tahay, kuwa u tilmaamaya dambiilayaasha "warbaahinta" si fudud loo aqoonsan karo iyaga oo aan farta ku fiiqin kuwa dhabta ah ee faa'iidada iyo faa'iidada u leh dhimashada, kuwa ku shaqeeya habkan. Aragti-gaabni ka sokow, noqo ka qayb-qaatayaasha xaaladaha colaaddu mar kale ka dhalan doonto.
Marka kuwii mas’uulka ahaa la raadiyo oo ciqaab la weydiiyo, ma waxay ka dhigaysaa magta dhibbanaha naf-hurnimadiisa, ma waxay yaraynaysaa xanuunka dhibbanaha, ma waxay soo celinaysaa qofkii ay jeclaayeen, oo ay ugu muhiimsan tahay, ma waxay ka hortagtaa soo noqnoqda. isku mid? Tan ugu muhiimsan, miyay ka hortagtaa soo noqnoqoshada mustaqbalka?
Haddi ciqaab loo yeedho waa aargoosi ee maaha cadaalad. Cadaalada dhabta ah waa in la hagaajiyo dhibkii dhacay.
Dad badan ayaan rumaysan karin waxa dhacaya. Waxaad mooddaa in taariikhdu dib u dhacday. Waxaan u maleynay in tani aysan dib u dhici doonin, laakiin hadda waxaan aragnaa inay ka sii dhowdahay sababtoo ah waxay ku taal albaabka Yurub halkaasoo aan la kulmeyno khilaafka. Waxaan u barannay dadka ay saameeyeen dagaallada fog, oo leh maqaar midab leh oo aan ahayn caddaan indho buluug ah. Carruurtuna waxay ahaayeen kuwo aan kabo-la'aan ahayn oo ma xidhnayn koofiyadaha tolmoon ama orso-teed. Hadda waxaan dareemeynaa in ay isku soo dhawaadeen oo aan ku shubaneyno isku duubni, laakiin waxaan ilownay in tani ay tahay sii socoshada waxa maanta ka dhacaya ama horay uga dhacay meelo badan oo adduunka ah: Afghanistan, Sudan, Nigeria, Pakistan, DR Congo, Yemen , Syria, the Balkans, Iraq, Palestine, Libya, Chechnya, Cambodia, Nicaragua, Guatemala, Vietnam, Algeria, Rwanda, Poland, Germany ama Liberia.
Dhibaatada dhabta ah waxay ka jirtaa kuwa ka faa'iidaysta dagaalka, oo leh xarumaha militariga-warshadaha, kuwa doonaya inay ilaashadaan awooddooda iyo hantidooda qalbi-la'aanta ah ee ku wajahan baahida dadka adduunka laga qabsaday, kuwa ugu badan ee maalin kasta u halgamaya sidii ay u dhisi lahaayeen. jiritaan sharaf leh.
Tani maaha khilaaf u dhexeeya Ukrain iyo Ruushka, marka loo eego inta u dhaxaysa Sahraawis iyo Morocco, Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda, ama Shiicada iyo Sunniga. Khilaafka dhabta ahi waxa uu ka dhexeeyaa quwadaha u adeegsada dad iyo dal iyaga oo is macaash, cabudhin iyo iska horkeenaya iyaga oo macaash iyo faa’iido doon ah. Dhibaatada dhabta ah waxay ka jirtaa kuwa ka faa'iidaysta dagaalka, oo leh xarumaha militariga-warshadaha, kuwa doonaya inay ilaashadaan awooddooda iyo hantidooda qalbi-la'aanta ah ee ku wajahan baahida dadka adduunka laga qabsaday, kuwa ugu badan ee maalin kasta u halgamaya sidii ay u dhisi lahaayeen. jiritaan sharaf leh. Arintan ayaa ah mid aad u qalafsan oo asal u ah taariikhdeenna: ku takri-falidda shacabka si ay isaga hor-yimaadaan iyadoo ay jiraan qaybo ka saaraya awoodda.
Arintan ayaa ah mid aad u qalafsan oo asal u ah taariikhdeenna: ku takri-falidda shacabka si ay isaga hor-yimaadaan iyadoo ay jiraan qaybo ka saaraya awoodda.
Aynu xasuusanno in 5-ta waddan ee xaqa u leh diidmada qayaxan ee Qaramada Midoobay ay sidoo kale dhacdo in ay noqdaan 5-ta waddan ee ugu badan ee soo saara hubka adduunka. Hubka ayaa dalbanaya dagaallo iyo dagaallo hub…
Dhanka kale, dagaalladu waa hadhaagii marxaladii taariikhdeenii hore. Ilaa maanta, waxaan la noolay iyaga, ku dhawaad ​​iyaga oo tixgelinaya sida "dabiiciga ah", sababtoo ah ma aysan keenin khatar halis ah noocyada. Dhibaato intee le'eg ayay ku dhici kartaa bini'aadamka haddii mid ka mid ah uu dagaal galo mid kale oo dhowr boqol ay dhintaan? Waxa ay ka sii socotay kumannaan. Kadibna miisaanku wuu sii kordhay, iyada oo horumarinta tignoolajiyada ee farshaxanka dilka. Dagaalladii adduunka ee ugu dambeeyay dadka dhintay waxay ahaayeen tobanaan milyan. Awoodda burburinta hubka nukliyeerka ayaa si aad ah u kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa. Hadda, iyada oo ay suurtagal tahay iska-hor-imaad nukliyeer ah, noocyadayadu waxay horeyba khatar ugu jireen. Joogitaanka jinsiyadda bini'aadamka hadda waa su'aal.
Ma awoodi karno tan. Waa marxalad isbedel ah oo ay tahay inaan go'aan ka gaarno nooc ahaan.
Shacbigu waxa aanu tusaynaa in aynu ognahay sida aynu u midoobi lahayn oo aynu ka faa'iidaysano in aynu wada shaqayno oo aan ka ahayn in aynu iska horkeenno.
Labo jeer ayaan horey u soo marnay meeraha waxaanan idiin xaqiijinayaa in aanan la kulmin qof aaminsan in dagaaladu ay yihiin dariiqii hore loo mari lahaa.
Lixdan waddan ayaa horey u mamnuucay hubka Nukliyeerka iyagoo saxiixay heshiiska mamnuucidda hubka Nukliyeerka (NPT). Aan ku dirno dawladeena inay ansixiyaan. Aan go'doomiyo wadamada difaacaya hubka nukliyeerka. Caqiidada "ka-hortagga" ayaa ku guuldareysatay, maadaama hub aad u xoog badan laga helayo dalal badan oo badan. Khatarta Nukliyeerka lama tirtirin; taa caksigeeda, waa ay sii xoogaysanaysaa. Si kastaba ha ahaatee, tallaabo dhexdhexaad ah, aynu hubka nukliyeerka gelinno gacanta Qaramada Midoobay dib loo aasaasay oo leh jihada cad ee dhinacyada badan leh iyo xallinta dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bani'aadamnimada: gaajada, caafimaadka, waxbarashada iyo isdhexgalka dhammaan dadka iyo dhaqamada. .
Aan isku xirnaanno oo aan si weyn u muujinno dareenkaas si aan u ogaanno kuwa na mataaneysa: ma awoodno inaan mar dambe awoodno dagaallo hubeysan. Dagaaladu waa dabar-goynta aadanaha. Mustaqbalku wuxuu ahaan doonaa dagaal la'aan ama mayaba.
Jiilasha cusub ayaa nooga mahadcelin doona.
Rafael de la Rubia. Bani'aadamnimada Isbaanishka. Aasaasihii Ururka Adduunka ee aan lahayn Dagaalo iyo Rabshado iyo af hayeenka Maarso Adduunka ee Nabadda iyo Rabshadaha theworldmarch.org
Fariin ku socota dhammaan dowladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay iyo Hogaamiyeyaasha Qaramada Midoobay (Ukraine)
Ardaydu waxay ka hadlaan Ukraine iyo Afgaanistaan
March 2, 2022 Warar & Muuqaal, Dhalinta diirada la saaray 0
Koox ka mid ah Macalimiinta College Columbia University ardayda u doodaya Afgaanistaan ​​waxay ku baaqaysaa in fiiro gaar ah loo yeesho waxyaabaha ay wadaagaan ee dagaalku keenay dhibaatooyinka bini'aadantinimo sida hadda ka jirta Ukraine iyo waddamo badan. [sii wad akhriska…]
Heshiiska UN-ka ee Mamnuuca Hubka Nukliyeerka wuxuu gaarayaa ansaxinta 50 ee loo baahan yahay si loo dhaqan galo
October 25, 2020 Warar & Muuqaal 0
Bishii Oktoobar 24, 2020, Heshiiskii Qaramada Midoobay ee Mamnuuca Hubka Nukliyeerka wuxuu gaaray dhinacyada loo baahan yahay ee 50 dowladood si ay u dhaqan gasho 90 maalmood, taasoo ka dhigeysa mamnuucid gaar ah oo hubka nukliyeerka ah, 75 sano kadib isticmaalkooda ugu horreeyay. Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada waa hay'ad sharaf leh oo leh ICAN, isbahaysiga bulshada rayidka ah ee adduunka oo horseeday dadaalkii lagu qaatay heshiiska. [sii wad akhriska…]
Iskuduwaha Ololaha Caalamiga ah ayaa Abaal Marin ka helay Shaqada Barashada Cidhibtirka Dagaal
Waxaa laga yaabaa 23, 2019 Warar & Muuqaal 1
On May 15, Tony Jenkins, Isuduwaha ee Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada, helay Abaalmarinta Challenge Abaal marinta ka Global Challenges Foundation iyada oo lala kaashanayo London School of Economics (LES) Institute of Global Affairs. [sii wad akhriska…]
Kathleen Kanet wuxuu leeyahay,
April 16, 2022 at 7: am 36
Akhrinta Maalinta Quduuska ah ee dhammaan kuwa Ilaah ku sharfa diimaha oo dhan: Tani waa rajadayda, rabitaankayga, riyadayda riyadayda, shaqadayda, hadafkayga hadda iyo inta noloshayda ka hadhay. Wadajir waa suurtagal! Aniga ahaan waad ku mahadsan tahay akhrinta Sabtida Quduuska ah oo riix inaad wax badan sameyso!